दन्किरहेको आन्दोलनको मुस्लोमा पानी हाल्ला त वालुवाटर बैठकले ? ~ FMS News Info
दन्किरहेको आन्दोलनको मुस्लोमा पानी हाल्ला त वालुवाटर बैठकले ?
काठमाडौँ, भदौ १९ । पछिल्लो समयको परिवर्तीत राजनीतिक गतिविधि तथा तराइ मधेसमा दन्केको आन्दोलनका विषयमा ठोस निकास निकाल्न भन्दै शीर्ष दलको बैठक आज बस्दैछ । केही बेरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने बैठकले असन्तुष्ट थरुहट तथा मधेसी समुदायको माग सम्बोधन गर्ने गरी संविधानको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव हाल्ने विषयमा पनि छलफल हुने वालुवाटार निकट स्रोतले जनाएको छ । यस विषयमा हिजो बेलुका पनि दलहरुले छलफल गरेका थिए ।
तर ठोस निर्णय भइनसकेकाले अहिले फेरि बैठक बसेर निर्णय गर्ने दलहरुको भनाइ छ । हिजोको बैठकमा असन्तुष्टका माग सम्बोधनका लागि विषयमा थारु, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम आयोग गठन गर्ने तथा थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्ने विषयमा छलफल भए पनि सहमति भने भइसकेको छैन ।
दुई तिहाइ विधेयकमार्फत असन्तुष्ट पक्षको माग पुरा गर्न प्रमुख दलहरुले साझा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरेका छन् । असन्तुष्ट दलहरुसँग वार्ता र छलफल भए पनि ठोस सहमति भइनसकेकाले दलहरु उनीहरुको माग सम्बोधन हुने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारीमा लागेका हुन् । ७ प्रदेशसहितको संविधानको विधेयक संविधानसभामा पेश भएर प्रक्रिया अघि बढेसँगै थरुहट तथा मधेसी मोर्चाहरु आन्दोलनमा छन् ।